पनीर - मात्र होइन स्वादिष्ट र स्वस्थ खाना हो। को ग्रेड बुझ्न क्षमता, स्वाद र aftertaste थाहा कस्ता सेवा र के खाना र पेय संयुक्त छ, को गहन ज्ञान आवश्यक जब मूल्याङ्कन भोजन शिष्टाचार र पाक कला को subtleties। सबैले तुरुन्तै विशिष्ट स्वाद, जस्तै एक विशिष्ट प्रकार, आकलन गर्न सक्छन् नीलो पनीर। अन्य प्रजातिहरू लागि आफूलाई शाब्दिक accustom गर्नुपर्छ। र पहिलो पछि अन्य मनपर्ने विनम्रता हुनुको मा टेस्टिङ।
Gorgonzola बस यस्तो पाक कृति बुझाउँछ। इटालियन भोजन को बाल, यो मध्य युग मा आविष्कार भएको थियो, र यो दिन गर्न दृढ र निर्धक्क भई नीलो पनीर को स्तर मा शीर्ष स्थिति कब्जा, डेयरी उत्पादन को शीर्ष सबै भन्दा प्रसिद्ध मा राख्छ।
यो चीज पहिलो इटाली को उत्तर पश्चिमी मा स्थित छ जो लोम्बार्डी को प्रान्त, मा पीसा थियो। र नाम उहाँले मिलान गर्न धेरै नजिक स्थित एक सानो शहर सम्मान दिइएको थियो। यसको विशिष्ट, तत्काल चिन्न मसालेदार स्वाद संग Gorgonzola पनीर लामो उम्दा Delights लागि विशाल माग पूरा गर्न नोभारा, Pavia र लोम्बार्डी अन्य शहर मा उत्पादन गरिएको छ। दायाँ गरेर इटालियन चमत्कार मानिन्छ!
impurity बाख्रा वा भेडाको एक थोपा बिना मात्र गाई गरेको दूध, - उत्पादन को आधार। को acidification प्रक्रिया को लागि, यो एक विशेष इन्जाइम थपियो। दूध thickens गर्दा, यो हल्कासित जोश र ट्यांक देखि घरेलु पनिर, पक्षबाट सारियो राम्रो dripping छांछ गर्न thinned कपडा संग लाइन। पनीर टाउको एक निश्चित घनत्व प्राप्त गर्दा, यो उल्टो छ। यो2हप्तासम्म4पटक गरेको छ। gorgonzola पनीर देखि - मोल्ड, त्यसपछि यसलाई पूर्वनिर्मित Penicillium एक फंगल संस्कृति थपियो मा शिक्षा परिपक्व गर्न थाल्छ।
पहिले, कठोरता दिनकै, उत्पादन टाउको नुन rubbed। विवाद मर्मज्ञ, बढ्दै, गहिरो रोपेको दिन पनीर हरियो-नीलो मोल्ड को नसाहरु। निस्सन्देह, सामान्य छैन - संकेत पकवान लामो मिति र महान परे गएको छ कि - खाना। यो देखिन्छ खैर, यो संगमरमर रेखाचित्र सम्झाएर, धेरै सुन्दर छ। पूर्ण तत्परता पनीर gorogonzola गर्न आउँछ राम्रो चाँडै -2वा4महिनाको लागि। फरक विविधता को प्रजाति सम्बन्धित छ। उत्पादन खाना "जवान" मा प्रयोग गरिन्छ - एक नरम बनावट, नम्र स्वाद, अधिक गुलियो साथ। र ripened - बाक्लो स्थिरता, तेज-मसालेदार स्वाद। को मज्जा रंग वा शुद्ध सफेद वा pinkish क्रीम मा। gorgonzola ढाकिएको एक रातो पाप्रो (फोटो के यो जस्तो देखिन्छ एक विचार दिन)। तयार टाउको राम्ररी हावा को ingress रोक्न र अत्यधिक मोल्ड वृद्धि रोक्न पन्नी मा र्याप। तर, यसको राशि स्वाद असर गर्दैन!
डेकल अनुसार, कुलीन पनीरों को मिठाई गर्न खुवाइन्छ। तिनीहरूले मिठाई, फल, चकलेट राम्रो हो। फ्रान्सेली द्वारा शुरू फैशन - तिनीहरूले Gorgonzola र कफी प्रस्ताव। यो एउटा सँगैको पेय उपयुक्त रेड वाइन मा -, बाक्लो मीठो र अर्ध-मीठा। हाम्रो नीलो पनीर तेज को स्वाद देखि, त्यसपछि यसलाई प्रयोग गरिन्छ, र खानाको अघि appetizer रूपमा - यस भोक, गैस्ट्रिक रस को profuse secretion उतेजित गर्नु लागि। उहाँले एक उत्कृष्ट भर्नु हुनेछ एक पनीर प्लेट र मुख्य तालिका मा। तर, स्कोप सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ को धेरै व्यापक प्रयोग हो। आखिर, यो पास्ता व्यञ्जन, एउटै परम्परागत इटालियन पास्ता र धेरै, धेरै लागि सूप, क्रीम, सस बनाउन आधारमा।
फाइदा र उत्पादन को बुरा
Gorngozola - पनीर पनि छैन मात्र स्वादिष्ट, तर उपयोगी छ। उत्पादन मात्र नकारात्मक - यो एकदम उच्च बोसो सामग्री हो। सीमा खपत किनभने अतिरिक्त वजन, उच्च कोलेस्ट्रल स्तर संग उपहार लायक मान्छे। यो पहिलो हो। दोश्रो, किनभने मोल्ड उत्पादन को ठूलो प्रतिशत को आंतों microflora मा परिवर्तन हुन सक्छ। तथापि, तपाईं हरेक दिन यो खान भने, र कुनै सानो अंश। एउटै कारणले यसलाई गर्भवती महिला र lactating आमा gorgonzola लागि सिफारिस गरिएको छैन। यो के प्रतिस्थापन गर्न सक्छ, तपाईं सोध्नु। पहिचान शेफ विश्वास पनीर "भोयला" वा "Dor निलो" भनेर। स्वाद नै बारेमा छ, तर यी आहार पनीरों को गुण केहि ठूलो।
घर मा धूम्रपान माछा भण्डारण कति र कसरी गर्ने?
केक र पेस्ट्री को आफ्नो जीवन: सुविधा र भण्डारण सिफारिसहरू
हानि र chickpea को लाभ (मटर)
हाइड्रोजनीकृत तेल: सुविधाहरूको सूची
चीन को मान्छे। चीन प्रमुख मान्छे
यस बालिका लागि फोटो सत्र लागि तस्बिरहरू। को हिउँदमा फोटो शूट लागि छवि
अभिनेत्री Kortni फोर्ड: चयन Filmography
कति पकड तोरी: प्रयोग सुविधाहरू
नुनखरा को Inhalation र "Ambrobene": औषधिको खुराक र निर्देशन
होटल Radisson शाही, मास्को: ठेगाना, होटल को विवरण
Shellac कोटिंग। डिजाइन र चित्रकला को विचार
Kharkov मा पानी पार्क - सम्पूर्ण परिवारको लागि वास्तविक मजा!